एक वर्ष कैदसहित जरिवाना – Sulsule
एक वर्ष कैदसहित जरिवाना
सुलसुले २०७७ कात्तिक २४ गते १३:५६ मा प्रकाशित
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राख्दै गर्दा पक्राउ परेकालाई एक वर्ष कैदसहित जरिवाना गरेको छ । गत असोज १५ गते कलङ्की क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा मिति सकिएका उपभोग्य वस्तु बजारबाट सङ्कलन गरी नयाँ मिति राखेर पुनः बजारमा पठाउँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परेकालाई कारवाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
पुनः म्याद राख्दै गर्दा पक्राउ परेका दुई कम्पनीका दुई जना सञ्चालकलाई एक वर्ष कैद तथा प्रतिव्यक्ति रु. तीन/तीन लाख जरिवना गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार असोज महिनामा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेन्द्रप्रसाद सुवेदीको इजलासमा पेश भएका मुद्दामा आइतबार फैसला गर्दै उक्त निर्णय गरिएको हो ।
उक्त मुद्दामा आयान डिस्ट्रिब्युटरका पुष्पादेवी अग्रवाल, मुन्ना ठाकुर, पप्पुकुमार ठाकुर, स्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र विक्रमप्रसाद गुप्ता गरी सात जनालाई प्रतिव्यक्ति रु. तीन लाख १२ हजार गरी रु. १८ लाख ७२ हजार जरिवाना गरिएको छ । दुई सञ्चालकसहित कामदार सात गरी नौ जनाले तोकिएको जरिवाना रकम जम्मा गरेपछि यसअघि पुष्टादेवी अग्रवालले जम्मा गरेको रु. एक करोड धरौटी रकम फिर्ता हुने विभागले जनाएको छ ।
असोज १५ गते आयानका सञ्चालकका रुपमा प्रक्राउ गरिएको अग्रवाललाई रु. एक करोड धरौटीमा असोज १६ गते छोडिएको थियो । विभागमा अग्रवालले आफ्नो नाममा कम्पनी दर्ता भएतापनि कम्पनीको सबै जिम्मा बोथ्राले निर्वाह गरिरहेको जनाएपछि धरौटीमा छोडिएको थियो । आयन र विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरमा रहेका रु. दुई करोड ९४ लाख बराबरको म्याद सकिएका खाद्यवस्तु स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा नष्ट हुने विभागले जनाएको छ ।
रिलेवलिङ पुष्टि भएन : यसैगरी बजार अनुगमनका क्रममा विभागको टोलीले काठमाडौँको महाराजगञ्ज र मालिगाउँमा ठूलो परिमाणमा म्याद सकिएका खाद्य वस्तु भेटाएको थियो । एकै स्थानमा ठूलो परिमाणमा खाद्य वस्तु भेटिएपछि रिलेवलिङको शङ्का गरेर उक्त स्थानमा शिलबन्दी गरी अनुसन्धान गर्दा रिलेबलिङ पुष्टि नभएपछि जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले मुद्दा दर्ता गराएको उक्त घटनामा पुष्टि हुने प्रमाण नभेटेपछि जरिवानासहित वस्तु नष्ट गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले राससलाई जानकारी दिए । जाडियक मार्केटिङ प्रा.लि.का सञ्चालक जीतेन्द्रकुमार लोहियालाई रु. तीन लाख र अन्य दुई जना कामदार मुकेश रौनियार र अनिल भन्ने आशिष मगरलाई प्रतिव्यक्ति रु. एक लाख पचास हजार गरी तीन लाख जरिवाना गरिएको हो ।
त्यस्तै महानिर्देशकलाई कसुरका आधारमा कम्तीमा रु. ५० हजार जरिवानादेखि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी कैदसहित जरिवाना गरिएको विभागका महानिर्देशक नेन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।